Intle i-200m ukusuka e-Itacimirim Beach !!
Iflethi okanye indlu ekwi-complex (icondo) yonke sinombuki zindwendwe onguMichelle Abu
Yiza uhlale kwelinye lolona lwandle luhle kakhulu eBahia, ekwiikhilomitha ezi-8 ukusuka ePraia do Forte!
I-Apt enamagumbi okulala amabini aphindwe kabini kunye ne-suite enye, zonke zinemeko yomoya eyahlulahlulweyo kunye nefeni. Ikhitshi lixhotyiswe ngefriji, isitovu, i-oven yombane, i-blender. Igumbi lokutyela, igumbi leTV (intambo) kumgangatho ongaphezulu (iphi i-suite), i-balcony ejonge kwi-condo.
Igaraji yangaphakathi yemoto eyi-1 w / isango lombane. I-condominium enokhuseleko olupheleleyo (iikhamera kunye nomgcini-mgcini / umgcini-mnyango emva kwemini / kusasa).
Indawo ezolileyo, ikufutshane kakhulu kolunye lolona lwandle luhle kakhulu eBahia. Ifumaneka kuNxweme oluMantla kunye kufuphi nePraia do Forte. I-suit epheleleyo kunye nezinto zendlu, ilinen yokulala kunye nebhafu. I-condo entle enamachibi (abadala kunye nomntwana). Ifanelana nayo yonke into entsha !! I-condo yokhuseleko iyonke.
4.91 ·Izimvo eziyi-59
4.91 · Izimvo eziyi-59
Indawo ezolileyo nekhuselekileyo enezindlu kunye neendawo zokuhlala. Kukulungele ukuhamba. Inechweba elihle, ngelishwa alikulungelanga ukuhlamba, kodwa linombono omhle. Ayinazo iindawo zokutyela ezininzi kunye neemarike ezikufutshane, indawo yokutyela nje ebizwa ngokuba yiPapiri 300mts ukusuka kuAp. Kukho enye indawo yokutyela entle kakhulu ebizwa ngokuba yi-O Pescador kufutshane nezinye iintente ezikumgama oyi-3km ukusuka kule ndawo. Ideal sele ithatha ivenkile yokuhlala. Ukuzola kunye nokuzola yinto oya kuyifumana kule ndawo !! Kwelinye icala lendlela (Estrada do Côco), ukuhamba ngemoto sisixeko saseBarra de Pojuca kunye norhwebo lwendawo (intengiso, ikhemesti phakathi kwabanye)
I-Praia do Forte isondele kakhulu, iikhilomitha ezi-5 ukusuka ekungeneni kwe-Itacimirim kwi-Estrada do Côco. Apho uya kufumana iindawo zokutyela ezintle, ubomi basebusuku, iivenkile, iibhanki, kunye nentengiso epheleleyo yokuhlala kwakho ukuze ubengcono !!
Ukuba awuhambi ngemoto kwaye ufuna into yokuhamba ukuze ujikeleze, ndingabonisa abaqhubi abakhulu abalungiselela indawo.
Umbuki zindwendwe ngu- Michelle Abu
Ndiya kuhlala ndiqhagamshelwe ngeefowuni, okanye i-imeyile. Kodwa andizuhlala ndikwazi ukuba semntwini. Ngoko ke, uya kubuliswa ngumntu othembekileyo oya kukuchazela indlela esebenza ngayo indlu yaye uya kufumaneka ngokobuqu ukuba uyayifuna. Nawuphi na umbuzo ungandiqhagamshela nangaliphi na ixesha! Sifuna ukuba uzive ukhululekile kwaye ube nokuhlala okumangalisayo!
Ndiya kuhlala ndiqhagamshelwe ngeefowuni, okanye i-imeyile. Kodwa andizuhlala ndikwazi ukuba semntwini. Ngoko ke, uya kubuliswa ngumntu othembekileyo oya kukuchazela indlela eseben…
UMichelle Abu yi-Superhost